Tsy Ny Fanagiazana Ny Firavaka Ihany No Fiovàna Mahatsiravina Amin’ny Politikan’i Danemark Momba Ireo Mpitsoaponenana · Global Voices teny Malagasy
MpanoratraEva Hoier Greene
Voadika ny 16 Febroary 2016 2:34 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Svenska, 繁體中文, 简体中文, English
#RefugeesWelcome (fandraisana ireo mpitsoaponenana) tao Copenhagen: ireo olompirenena ao Copenhagen, Danemark, nikarakara fanangonana izay zavatra ilaina ho an'ireo mpitsoaponenana avy any Siria rehefa tonga tao amin'ny Gara Foibe tao Copenhagen ry zareo. 10 Septambra 2015. Sary avy amin'i Chris Alban Hansen. CC BY-SA 2.0
Rehefa nolanian'ny antenimiera Danoà ilay lalàna L87 tena niadiana hevitra mafy tamin'ny 26 Janoary, dia nitarika tafiotranà resabe nameno ny media sôsialy sy ireo efa nahazatra, izay mbola mijanona ho zara raha takatra sy voasahan'ireo politisiana nampandresy azy iny.
“Lalànan'ny Firavaka” no tena ahafantarana tsara ilay lalàna. Saingy raha ny andraikitry ny polisy tamin'ny fisavàna sy fangiazana fanànana nitentina 10.000 couronnes Danoà (eo amin'ny US $1,460) na mihoatra no misarika ny sain'ny rehetra, misy andininy hafa amin'ilay lalàna no mametraka loza mitatao ho an'ny zo sy ny fiadanan'ireo mpikatsaka fialokalofana.
Ny endrika tena tsy dia noraharahaina tamin'ilay Lalàna L87, teo amin'ny sehatra iraisampirenena, dia ny hoe tsy maintsy miandry telo taona ankehitriny ireo mpangataka fialokalofana, raha toa ka taona iray izany taloha, vao afaka mameno antontan-taratasy ahafahan'ny vady aman-janak'izy ireo manatona azy, izay mety hanitsakitsaka tanteraka ny fifanarahana iraisampirenena nosoniavin'i Danemark (satria ireo mpiasam-bahoaka Danoà ihany dia efa nahatsapa izany teo ampanoratana fampitandremana tao anatin”ilay volavovlan-dalàna naroso ho an'ireo mpanao lalàna). Taona roa fanampiny amin'ny fisarahan'ny ankohonana noho ny ady na ny tsy fandriampahalemana izany.
Takian'ilay lalàna ihany koa ireo tovolahy mba hitoetra any anaty tranolay any an-toby, zara raha afaka mivezivezy, na dia eo aza ny fisian'ny trano foana mipetra-potsiny ao Danemark.
Kanefa, ilay ampahany momba ny firavaka sy ny fanànana hafa no nisarika ny sain'izao tontolo izao. Taorian'ny adihevitra be sy fisalasalàna, nesorin'ireo mpanao lalàna tsy ho ao anatin'ilay L87 ny peratra mariazy sy ny firavaka sasany misy ‘lanjany manokana ara-pihetsehampo’. Na izany aza, tsy ho afaka amin'izany ireo “valizikely feno diamondra”, araka ny nanipihan'ny Minisitry ny Fitsaràna, Soeren Pind, azy.
Tsy ampy nampitoniana ny tsy hafaliana ilay fepetra natao ho an'ny peratra mariazy. Nofoanan'ilay Shinoa mpanakanto malaza, Ai Weiwei, ny fampisehoana efa ela nandrasana tokony hatao tao amin'ny Mozea Aros, ny Sekretera Jeneraly fahiny tao amin'ny Firenena Mikambana, Kofi Anan, naneho ny ahiahiny sy ny hatairany, ary ny gazety britanika The Guardian nanao sariitatra nanehoana ny praiminisitra Danoà, Lars Loekke Rasmussen, nitafy fanamiana Nazi.
Ao amin'ny media sôsialy, ilay manampahefana Jacob Nielsen dia nanoratra momba ny hatezerany sy ny hadisoam-panantenany tao anaty lahatsoratra fohy izay in-21.000 mahery no nifampizaràna:
Tsy niditra ho mpitandro filaminana aho mba hahafahako maka ny fananana manokan'ny olona!
Voalohany indrindra dia niditra ho mpitandro filaminana aho satria fantatro fa zavatra iray tokony hitolomanao mafy ny rariny, ary tsy maintsy misy olona natao hiaro ireo tsy afaka ny hiaro ny tenany. Na aiza na aiza, tsy misy toerana hafa ahafahanao manao izany afa-tsy ny ao anatin'ny pôlisy – rehefa tsy manararaotra ny fahefànao ianao.
Mazàna aho no mitazona fananan'olona – noho izy ireny tsy araka ny lalàna, na satria nangalarina avy amin'ny hafa na satria mety hampiasaina handratràna ny hafa. Fa tsy hisava ny vatan'ny sasany velively kosa aho na hijery izay any anaty vàvany mba hahafahako maka ny FIRAVAKA AZY IREO MANOKANA.
…. Raha manao izany aho, mety hivadi-mandry ao am-pasana ao ireo raiamandrenibeko izay nanao ny Fanoherana sy tena nolalaiko fatratra, noho izay mety ho tsaroan-dry zareo momba ahy.
Zava-poana ny ezak'ireo politisiana sy diplaomaty hanipika fa hoe mijanona hatrany ho firenena iray malàla-tànana i Danemark rehefa injay ka fanokànana ny 0,7 % amin'ny Harinkarena Faobe takian'ny Firenena Mikambana hatokana ho an'ny fanampiana ho fampandrosoana sy ny asa noho ny maha-olombelona no resahana — na dia ny ampahatelon'izany no nolaniana tao Danemark ihany, tsy midika mihitsy fa hoe nolaniana nankany amin'ny fanohanana ny vahoaka any ivelany mila izany ny 0,7 % tamin'ny harinkarena faobe. Tsy vitan'ny tohankevitra hoe niharan'ny fanagiazana ny volany sy ny firavakany ihany koa ireo Danoà nameno taratasy fangatahana fiahiana sosialy ny nanadio ny laza ratsy an-gazety mahazo an'i Danemark. Velom-panahiana mafy amin'ny fahasimban'ny lazan'ny fireneny ireo indostria Danoà.
Nahoana araka izany no tratry ny tsy nampoiziny ireo Danoà politisiana ao anatin'ity raharaha ity? Ahoana no tsy nahavitàny nanazava izay heveriny fa tolokevitra tena tsy miangatra, mifototra amin'ireo soatoavina Danoà amin'ny fandraisana anjara ao anatin'ny vondrom-piarahamonina, alohan'ny angatahana fanampiana avy aminy?
Zavatra iray azo raisina ny hoe rehefa mifanohitra amin'ny tena zavamisy ny fomba fahitàn'ny firenena iray ny tenany — amin'ny tranga Danemark izay bitika tsy noeritreretina hahavita zavatra, tsara fanahy mijery ny maha-olombelona ary tsy mahavita mampijaly — lasa toy ny jamba tanteraka ireo politisiana manoloana ny mety ho vokatry ny asan-dry zareo amin'ireny olona tsy noheverina hahatafiita zavatra ireny.
Zavatra hafa azo raisina koa ny hoe ireo antoko avy amin'ny elatra-havanana mpanohitra ny mpifindra monina dia samy tonga saina daholo koa amin'ny doka naterak'ilay lalàna momba ny firavaka ary dia niarahaba azy iny. Lasa ampahany amin'ny fanovàna endrika iniana atao ho an'i Danemark ilay izy, ho toy ny toeram-pitodiana tsy mahasarika ho an'ireo mpikatsaka fialokalofana, izay nanomboka tamin'ny Novambra 2015 niaraka tamin'ireo doka novatsian'ny governemanta ary navoaka tao anaty gazety Libaney nanasongadinana ireo fepetra henjana napetraky ny firenena momba ireo mpitsoaponenana.
Mitohy mihamafy hatrany ny tolon'i Danemark ho fanatsaràna ny lazany sy ny maha-izy azy ara-politika, ary fantatr'ireo Danoà politisiana indray fa asa fandraharahàna tena feno fitaka sy saropady ny fanaovana politikam-pirenena eo ambany fitiliana amin'ny mikraoskaopy ataon'ny iraisampirenena.